Duqeyn Mise Dulmi iyo Dambiyo Dagaal! | Xaqiiqonews
Duqeyn Mise Dulmi iyo Dambiyo Dagaal!
Duqeyntii ugu dambeysay waxa ay ka dhacday “kuunya baroow” oo ka tirsan Shabeelaha hoose, hase ahaate qeybta ugu xanuunka badan ee sheekadani waxa ay taay go’aanka Df-ka oo ilaa hadda ah “dhexdhaxaadnimo”!
Sheekada duqeymaha Mareykanka ma ahan “mid ugub ah”, Mareykanka ayaana Soomaaliya ka fuliyo duqeymo ciwaan loogu dhigay “dagaalka qarsoodiga ah ee ka dhan ah argigixisada”.
Soomaalida ayaa ku maahmaahdo “meyd waxa uu dambeeyey kaas la sii wado”, biya dhac warka waxa uu yahay duqeyntii Mareykanka ee ugu dambeysay taasi oo ka dhacday deegaanka Kuunya Baroow waxa ay aheyd duqeyn heer kale ah oo aad u xanuun badan.
Caruur ka mid aheyd dhibanayaashii duqeyntii Kuunya barrow
Habeenimadii Axadda oo ku beegneyd 17 May, diyaarad drone ah ayaa gantaal la heshay guri ku yaallay deegaanka Kuunya barrow, dadkii duqeynta ku dhawaacmay waxaa ka mid ahaa hooyo iyo afar caruur ah oo ay dhashay.
Sidoo kale Aqri..Qoraalkan Ayaa Ku qornaa Gantaal Mareykanka ku Duqeeyeen J/Dhexe
Ciidanka Afrikom ayaa dhabarka u riday mas’uuliyadda iyaga oo sheegay in halkaasi ku laayeen “xubno alshabaab ah”, hase ahaatee dhacdadii ay ishooda ku arkeen dadka deegaanka waa ay ka duwaneyd sheekashada Afrikom.
caruur ka mid aheyd dadkii ku dhaawacmay Kuunya baroow
guriga ay daganaayeen dadkii dhaawacmay
caruur iyo hooyo ka mid ahey dadkii dhaawacmay
Hay’adda Amnesty ayaa dhowr jeer dunida u dirtay qeylo dhaan, iyada oo sheegtay in aysan jirin cid Mareykanka kula xisaabtanta duqeymaha uu ka fuliyo Soomaaliya ee ay waxyeelada ka soo gaarto dadka “aan waxba galabsan”.
“Waxa aan diwaan gelinay dhacdaba, dhacdadii ka dambeysay duqeymaha cirka Afrikom” ayuu yiri Deprose Muchena oo ah agaasimaha Amnesty international ee bariga iyo koonfurta Afrika.
Deprose Muchena ayaa sheegay in Afrikom ay aaminsantahay in ay dhibanayaasha waxyeeladooda ku dbooli karto marmarsiiyada caanka ah ee “argigixiso”, isagoo intaasi ku daray “cid su’aal iska weydiiso ma jirto,sidaasna macquul ma ah”.
Bacaad iyo qiiq ayaa indhaheyga buuxiyey
Dharaar cad 24 febaraayo 2020, gantaalka naarta “hellfire missile” oo ay soo gantay diyaarad drone ah ayaa haleelay beer ku taalay tuulada Kumbareere oo dhanka waqooyi 10 km kaga beegan degmada Jilib.
Gantaalka waxaa ku dhintay oday 53-jir ah, oo lagu magacaabi jiray Mohamud Salad Mohamud, oo ahaa maamulihii shirkadda Hormuud ee degmada Jilib, isaga oo ifka kaga tagay xaas iyo sideed caruur ah.
aqoonsiga hormuud ee mohamud salad mohamuud
isla bishaasi 2 febaraayo, fiidnimadii qiyaastii 08 pm, gantaal loo maleeynayo in uu ahaa “US GBU-69/B Small Glide Munition” kaasi oo watay madax culeyskiisu yahay 16 kilogram, ayaa haleelay qoys ka kooban shan xubnood oo u fadhiyey casho gudaha Jilib.
Qalfoofka gantaal bir ah ayaa madaxa laba u kala jaray Nuurta Kuusow Cumar Abuukar, oo aheyd 18 jir, waxaana ku dhaawcmay labo gabdhood oo ka yaraa oo lagu kala magacaabi jiray Faadumo oo 12 jir aheyd, iyo Cadeey oo 7 jir aheyd, sidoo kale waxaa dhawaacmay ayeeyadood Khadiijo Moxamed Geedow oo qiyaastii 70 jir aheyd.
Aaabo Kuusow Cumar oo guriga joogay markii ay duqeynta dhacaysay ayaa ku sharxay sidan “Waligey ma islaheyn waa idinla beegsanayaa, waxaan maqlay cod weyn, waxaan u maleeyey in guriga nagu soo dumay, qiiq ,carro iyo bacaad ayaana indhaha iga buuxiyey”.
Hay’adda Amnesty ayaa sheegtay in ka hay’ad ahaan bishii Maarso ay dowladda fedaraalka hordhigeen caddeymaha dad rayid ah oo “la duqeeyey” , balse ma jirin wax jawaab ah oo DF-ka ka soo baxay.